भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई यसरी ढोगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मोदीलाई के गर्लान् ? किन यसरी भारतीयहरुसँग झुक्छन् नेपाली नेताहरु ? – Gazabkonews
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई यसरी ढोगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मोदीलाई के गर्लान् ? किन यसरी भारतीयहरुसँग झुक्छन् नेपाली नेताहरु ?
सार्वजनिक भएको तस्विरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई दुई हात जोडेर शिर निहुराएको देख्न सकिन्छ । यो तस्विरमा दैनिक ट्रिबुन पत्रिकाको पञ्जाव ट्रिबुनमा पनि प्रकाशित भएको छ ।
उक्त तस्विर फेसबुकमा शेयर गर्दै झापाका पत्रकार प्रेम आचार्यले लेख्छन् “हामी यसरी नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउँछाै ।😀😀”
खासगरी लिम्पियाधुरालगायत सीमा विवादका विषयमा निर्णायक सहमति हुन्छ भन्ने गरी गरिएको राजनीतिक प्रचारबाजी दिल्लीबाट ज्ञवाली फर्केसँगै निरर्थक साबित भएको छ। ‘अब सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध भएको’ भन्ने प्रतिक्रिया यस्ता भ्रमणपश्चात् सदैव सुनिने औपचारिक वाक्यजस्तो बन्न पुगेको छ, जो यसपालि पनि दोहोरिन पुगेको छ।
Read More : यी हुन नेपालसंग आफ्नो सम्बन्ध भएका भारतीय चर्चित कलाकारहरु